Zuva: Chivabvu 11, 2020
2020 Zera Tea Rokutenga Mutengo Rakaziviswa
Mutungamiri Recep Tayyip Erdoğan vakazivisa sarudzo itsva dzakatorwa mukurwisa coronavirus mushure memusangano weCabinet. Mutungamiri Erdoğan vakataurawo nezvekutengwa kwetii uye vakataura chirevo ichi: Erdogan akati, "Kwegore ra2020." [More ...]
Ivo vanogona kuenda mumigwagwa mune shoma nguva dzinopfuura makumi matanhatu uye pasi pegumi
Mutungamiri Recep Tayyip Erdoğan vakataura izvi mushure memusangano wekharamu. Sekureva kwemashoko, vanhu vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu vachakwanisa kuenda kumugwagwa neSvondo, Chivabvu 65, 17 pakati pegumi nemana. Under 2020 [More ...]
Kufamba Ban Kuregedzwa ku9 Maguta
Kufamba Kurambidzwa Kuenda Kumaguta 9 Akabviswa: Mutungamiri Erdogan, akataura chirevo nezvenyaya iyi yakasvika paparty mushure memusangano weCabinet, wakazivisa kuti kurambidzwa kwekufamba kweguta kwakabviswa. Heano maprovince uko kurambidzwa kwekufamba kwakasimudzwa. [More ...]
Wokupedzisira Minute: Curfew Kudzora Kwave Mazuva mana uye Kuchenjera Kunouya
Mutungamiri Recep Tayyip Erdoğan vakataura mashoko akakosha mushure mePurezidhendi. "Nguva yekudzingiswa ichashandiswazve muna Chivabvu 16-17-18-19," Erdogan akadaro mukutaura. Mumusangano umo Erdogan akazivisa sarudzo dzevhiki nevhiki nekero yake kuNyika, [More ...]
COVID-2020 Precautions ye19 Zhizha Zororo
With kuuya nguva yezhizha pashure ane yatanga Turkey Covidien-19 rakaitwa zvakakodzera basa kuzoita kuti ushanyi zvekutepfenyura. Mukati me chiyero chemabasa aya, masimba emahotera munzvimbo dzekushanyira achaderedzwa nehafu. Zuva riraira pamhenderekedzo [More ...]
Post Coronavirus Bvudzi uye Yevhudzi Mari
Mukati meyero yezviyero zve coronavirus, vabati uye vhudzi vhudzi, avo mabasa avo akamiswa musi waKurume 21, vakatanga kushanda senge nhasi mangwanani. Vatengi vauya nekuvhurwa kwevabhureki vaive nemhezi yavo pasi pemirairo yehutsanana. 40 PERCENT NGUVA Asi basa [More ...]
Njanji Njanji uye Huru Maneja Management Systems
Kana iyo indasitiri yechitima ichitariswa maererano nenzira yemhando yepamusoro, inogona kugamuchira nhamba yakakura yemayero uye masisitimu ekutonga. Iyo upamhi hwekushandisa ine zvakawanda zvinoshandiswa muindasitiri yakadai yakazara. ISO 9001: 2015 Quality Management muRailways [More ...]
Maitiro eCoronavirus Anobata Vakadzi Vane Mimba
Nyanzvi dzinoti kushushikana kwavo kunogona kuwedzera nemhedzisiro yekushanduka kwamahomoni kunoonekwa nevakadzi vane pamuviri muchirwere chechirwere ichi pasi pekuti immune system inofanirwa kuchengetedzwa yakasimba panguva iyi. Vanamazvikokota vaienda kunamai kurovedza zvine hungwaru uye nguva zhinji [More ...]
Şakir Zümre, mumwe wehama dzepedyo dzaMashal Fevzi Çakmak, akaberekerwa muVarna muna 1885. Achipedza chikoro chepuraimari apa, akaenda kuGeneva. Akadzidza mutemo mukati umu. Zvakare munguva yeHondo Yenyika Yekutanga [More ...]
Gurukota rezvekutakurwa nezvivakwa Adil Karaismailoğlu vakaita bvunzo kuBaşakşehir İkitelli City Hospital yekubatanidza nzira yekuvaka nzira. Karaismailoğlu, iyo ambulensi viaduct inofanira kuitwa pamusuwo wedhipatimendi rechimbichimbi chechipatara uye kuvakwa kwemigwagwa yepamusuwo kumadokero masuo [More ...]
Kurambwa kweKumwe Kuremerwa kweDziviriro Yekudzingwa Chikumbiro mu Ankara YHT Mhosva Yetsaona
Nzvimbo Yekumhanya Yechikuru, iyo yakaita kuti Ankara-Konya kudzingirwa musi wa13 Zvita 2018 muA Ankara, yakadungamidzana nechitima chetara panguva yekupinda kwayo paMarşandiz station. The tsaona yakaitika pamusoro tsaona kuti chakauraya vanhu vapfumbamwe, mumwe detainee [More ...]
Adana Chitima Chiteshi Yekufambisa Ruzivo
Adana Chitima Chiteshi kana Adana Chitima Chiteshi ndiyo yechitima chikuru cheTCDD iri muSeyhan dunhu reAdana. Chiteshi chakaiswa mukushanda muna 1912. Nhasi, iko kumusha kune 6th Regional Directorate yeTCDD [More ...]
Iyo nyoro yechiteshi chitsva chebhazi, iri pakati pezvirongwa izvo Trabzon Metropolitan Meya Murat Zorluoğlu anowana kukosha, yakarongwa kutanga kutanga kwaKurume. Iyo nyowani iyo inozadza hwakakomba kushomeka muguta [More ...]
Tram Stops Akachena muna Eskişehir
Eskişehirlilerin takachengeteka, vakasununguka uye Utsanana zvifambiso kuramba basa kuitira mukana Eskişehir Metropolitan Municipality, kuchenesa basa kuitwa sezvo purogiramu vanorega panguva kwasviba yakanga kuchiita kupera kwesvondo rino. Corona Kupararira [More ...]
Ankara Metropolitan Municipality ine ruvara rwevanofamba netsoka pasi pemvura, mabhiriji uye rusina nzvimbo pamadziro muguta guru nemashiripiti anobata vevaimbi. Neiyo projekiti yakatangwa naMetropolitan Meya Mansur Yavaş, vepa painters kubva kuguta guru, [More ...]
Nyowani Chizvarwa Chekuuraya Disinfection Nguva muKonya Transportation
Konya Metropolitan Municipality, mukubatana neKTO Karatay University, iri kuenda kuchizvarwa chitsva muitiro yekuuraya masisitimu mukati mechikamu chekurwisa mhando nyowani dze coronavirus (Kovid-19). muenzaniso Turkey, ndiko kuti kudzivirira vanhu utano mukurwisa Koronavirüsl [More ...]
Mitsara yeBursa Inodzoserwa KuSainzi
Mumabharaki anoshandiswa pakupera kwevhiki mukati mechikamu chekurwisa hutachiona hwekorona, Metropolitan Municipality, inoenderera mberi nekuvandudza asphalt inoshanda mumidziyo mikuru yeBursa, kune rumwe rutivi, zvakare, inotsiva masevhisi anotarisirwa munzvimbo dzinovakidzana kwemakore. [More ...]
Rail System Flight Maawa Anowedzerwa MuIstanbul!
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) yakazivisa nemusi weMuvhuro kuti mutero mutsva uchaitwa mumajanji mushure mekutandara. Iyo yakatemwa metro uye tram mitsara inoshanda pakati pa 06:00 - 23:00. Une ruzivo muhuwandu hwevapfuuri [More ...]
Akçaray Nzvimbo Dzakawedzera Panguva Yakagadziriswa process
TransportationPark, mumwe wemubatanidzwa weKocaeli Metropolitan Municipality, yakazivisa kuti Akçaray icharonga kubhururuka kwemaminetsi matanhatu panguva dzakakwira kubva musi waMay 11, 2020, mukuchinja kuita maitiro. Akçaray ichaita nzendo munguva 6 dzakasiyana nguva, zuva [More ...]
Coronavirus Dambudziko kuIstanbul Airport! Nhamba yeVaperekedzi Yakaderedzwa ne 99,3 Maperesenti
Zvirambidzo zvekufambisa zvakaiswa pasi rese nekuda kwehutachiona hwe corona kubuda. Nechikonzero ichi, huwandu hwevakapfuura kuIstanbul Airport hwakadzikira ne99,3 muzana. Iyo State Airports Authority (DHMI) yakaburitsa manhamba ayo enhandare yaApril. [More ...]
Sakarya Nostalgic Tram ndiye Bhiri zvakare
Vachitaura mu 'Musoro Wekutungamira nePurezidhendi' chirongwa chakarongwa neSakarya University, Meya weMetropolitan Ekrem Yüce akataura nezve chirongwa cheNostalgic Tram, chine hunyoro hwacho chakamiswa nekuda kwekoronavirus. [More ...]
Tomris Uyar, uyo akafa pazera makumi matanhatu nemasere nemakore gumi nematanhatu apfuura uye akatisiya, akarangarirwa zvakare nedhisle yake. Heano hupenyu hwa Tomris Uyar uye anoshanda Tomris Uyar (Kurume 17 [More ...]
Iyo Inonyanya Kupfuma uye Greenest Option muCars LPG
Mushure mechirwere chekoronavirus, maitiro akagadziriswa akarongwa kutanga munyika uye munyika yedu anounza hutsva hunhu kumagariro. Nepo nzvimbo yekushamwaridzana uye mitemo yehutsanana ichiramba yakakosha pakugadziriswa, mota dzekufambisa neveruzhinji dzinopera. [More ...]
Investment hairegedze muchikamu chehunyanzvi
Kutevera kujekeswa kwemaitiro ekuvhura nzvimbo yekutarisa nehurongwa hwakagadzirwa mune yakashandiswa chikamu chemotokari, makambani ekuongorora, ayo akawedzera mari yavo, vatangawo kutora nhanho hombe mukudzana nesangano uye bazi. Yakashandiswa kutengeswa kwemotokari [More ...]
Rutsigiro rutsva rwekurima kweRural Rokuvandudza kwe1,2. Bilion Liras!
Gurukota rezvekurima uye Masango Bekir Pakdemirli; “Tinoenderera mberi nekuunza IPARD nharaunda dzekutsigira mabudiriro kune vanochengetedza mari nechinangwa chekudyara kwakawanda mumaruwa, mari zhinji yevanogadzira uye yakawanda mari yekubatira. Panguva ino [More ...]